Akhriso Hogaanka Sare Ee Shabaabul Mujaahidiin Oo Muslimiinta Caalamka Ugu Tahniyadeyay Ciidul Adxaa. – Calamada.com
Akhriso Hogaanka Sare Ee Shabaabul Mujaahidiin Oo Muslimiinta Caalamka Ugu Tahniyadeyay Ciidul Adxaa.
calamada August 23, 2018 3 min read
Mu’asasada Alkataa’ib ayaa faafisay Bayaan kasoo baxay Hoggaanka Xarakada Al Shabaab oo ku saabsan Munaasabadda Ciidul Adxaa.
Bayaan kasoo baxay hogaanka guud oo ku aadan hambalyada Muslimiinta ee ciida barakaysan ee Al-Adxaa sanadka 1439 Hijriya.
Allaah Ayaan u mahadcelinaynaa mar hore iyo mar dambe intaba, waxaan uga mahadcelinaynaa nicmooyinkiisa faraha badan ee uu noogu deeqay, waxaan ugu mahadcelinaynaa mahad u qalanta weyniga boqortooyadiisa in uu naga dhigay adoomadiisa uuna nagu karaamaystay nicmada Islaamka, nicmada Qur’aanka iyo nicmada Jihaadka. Allah wuxuu ku mahadsanyahay inuu nasakhay ciidihii jaahiliyada, uuna noo asteeyay –haddii aan nahay Muslimiinta- ciidaha Fitriga iyo Adxaa. Mahad iyo shukri oo dhana isaga ayay u sugnaadeen.
Mahadaas kadib, waxaan ummadeena Muslimka ah iyo hormuudkeeda Mujaahidiinta ah ugu hambalyaynaynaa ciida barakaysan ee Al-Adxaa, waxaanan ku leenahay, adinka iyo anagaba Allaha naga aqbalo camalka wanaagsan, waa maalin wayn oo uu Allaah kaga gaar yeelay maalmaha kale, waa maalin ay ku dhexjiraan shacaa’irtii Allaah, dadkuna ay udxiyada gowracanayaan, Muslimiintuna ay Allaah ugu dhawaanayaan xajka weyn, waa maalinkii gawraca, dadkuna ay Allaah ku weyneynayaan inuu waafajiyay wanaagaas, Muslimiintuna ay bishaaraysanayaan.
قال تعالي” والبدن ……………”
Hadaba sida maalinkaan iyo kuwa ku xiga ay u yihiin maalmo cunitaan, cabitaan iyo xuska Allaah, ayayna sidoo kale u yihiin maalmo Jihaad iyo ishtish-haad.
Allaahna wuu isku xiray labadaas cibaado, markii uu kitaabkiisa kariimka ah ku yiri
“لن ينال الله لحومها…………..”
cibaadaatka, muqadasaatka iyo shacaa’irta diintu waxay u baahan yihiin difaac iyo dhowritaan, si ay Muslimiintu awood ugu yeeshaan cibaadada Allaah, iyagoona aanan arintaas kaga cabsanaynin canaanta kuwa wax canaanta iyo dulmiga kuwa thaalimiinta ah.
Hadii aysan seefta iyo cududu jiri lahayd waa ay dayacmi lahaayeen cibaadaatku, karaamadana waa lagu tuman lahaa, dadkana waa laga hor-istaagi lahaa wadada Allaah, sida maanta ka taagan dhulka xaramaynka, halkaas oo ay Reer Aala Sucuud xoog ku fara-marooqsadeen xuquuqdii adoomadu u lahaayeen Xajka, ayna isku kaliyeeleen Xaramkii Illaaheey ee uu Allaah dadka ka dhigay kuwo u siman, kooda makka degan iyo kan banaankeeda ka yimid inta.
قال تعالى ” ان الذين كفروا ويصدون….”
وقال تعالى ” وما لهم ان لا يعذبهم الله…”
Waxaan u dardaarmaynaa Muslimiinta in ay maalinkaan barakaysan ku dadaalaan oo ay badiyaan tasbiixda, taxmiiidda, tahliisha iyo takbiirta. Sidoo kale waxaan kula dardaarmaynaa inay quudiyaan masaakiinta, salaantana faafiyaan, ayna booqdaan dadka xanuunsan, kuwa dhaawaca ah iyo maxaabiista. Waxaan sidoo kale kula dardaarmeynaa In ay kafaala qaadaan agoonta, haweenka araamisha ah iyo qoysaska shuhadada. Waxaan sidoo kale ku boorinaynaa in ay la yimaadaan hijro, Jihaad iyo diyaar-garoow, ilaa inta Muslimiinta ay ka xoroobayaan dulmiga dawaaqiida iyo gumaysiga gaalada, ayan Allahooda ka caabudayaan iyagoo aaminiin ah oo qaalbtoodu degantahay.
Cibaadada ugu fadliga badan maalmahan iyo maalmaha kalena waa Jihaadka lagu dagaalamo Jidka Allaah iyo Xajka, sababtuna waa dulqaadka badan ee ay u baahan yihiin, hadey tahay dadaalka lagu bixinayo, hantida ku baxaysa, safarka daraadood loo gelayo iyo halista loo marayo. Sidaas daraadeed ayuu Rasuulka SCW labadooda is barbar dhigay marki la waydiiyay ” Camalkee ayaa ugu fadli badan” Waxaa uu ku jawaabay “Allaah iyo Rasuulkiisa oo la rumeeyo” Waxaa lagu yiri ” maxaa ku xiga”Waxaa uu ku jawaabay “Jihaadka wadada Allaah” Waxaa lagu yiri ” Maxaa kusii xiga” Waxaa uu yiri ” Xaj mabruur ah”. Bukhaari iyo Muslim ayaa xadiithkaas soo saaray.
Rasuulka SCW waxaa kale oo uu yiri ” Camal wanaagsan majiro oo ka fadli badan midka maalmahan la sameeyo, -yacni tobanka hore ee dulxij- waxaa la waydiiyay ” Xitaa Jihaadka maka fadli badan yihiin” Waxaa uu ku jawaabay “Xitaa Jihaadka wey ka fadli badan yihiin, marka laga reebo nin naftiisa iyo maalkiisaba fagaaraha la yimid, kadibna aanan waxba kala soo noqonin” Bukhaari ayaa wariyay.
marka Maanta sida ay u tahay maalin Udhxiyo, ayey sidoo kale u tahay maalin tadxiyo. Waxaan Allah waydiisanaynaa inuu u gargaaro walaaleheena ribaadka kaga jira meel walba oo dunida kamid ah, uuna tamkiin u siiyo diintooda uu raaliga uga noqday.
Waxaan sidoo kale salaam u direynaa halyeeyada tawxiidka ee Imaarada Islaamiga Afghaanistaan ee uu ugu horeeyo Amiirka Mu’miniinta “Mawlawi Haybatullaah” Allaha xifdiyee. Waxaa kaloo u tahniyadeyneynaa walaaleheena Mujaahidiinta saadiqiinta ah ee ribaadka kaga jira Jaziirada Carabta, Maghrib Al-Islaam, Shaam, Ciraaq, Shiishaan, qaarad u ekaha Hindiya, iyo turkistaanta bari. Waxaan u tahniyadeyneynaa Amiirkeena Sheekh Ayman Adwahiri, Sheekh Abu Hurayra, Qaasim Ar-riimi, SheekhAbu Muscab Cabdul waduud iyo dhamaan mujaahidiinta ku kala sugan dunida dacaladeeda, Allaah dhibaato oo dhan haka dhowree, dhamaanteena Allaha naga aqbalo camalka kiisa wanaagsan, hana noogu khatimo shahaada wadadiisa ah.
Previous: Daawo Sawirrada: Fantasyo loogu Dabaal degayay Munaasabadda Ciidda Oo Ka Dhacay Magaalada Ceelbuur.
Next: Sawirro:Mahrajaanno Iyo Munaasabado Ciideed Oo Ka Dhacay Jamaame.